JIANGXI JINGYE IMISHINI TECHNOLOGY CO., LTD. ibhizinisi elizimele lobuchwepheshe obuphezulu elibhekene nocwaningo lobuchwepheshe nentuthuko, ukwakhiwa kobunjiniyela, ukwenziwa kwemishini nokufakwa. Futhi ireferensi yomqondo wokuklanywa kokuluhlaza, ukuvikelwa kwemvelo nokonga amandla, besesihole ekubeni ngumhlinzeki osezingeni eliphakeme lokudla, isiphuzo, okuphilayo, amakhemikhali, imishini yezemithi namandla amasha, imishini yokuxhumana ye-fiber fiber.
Kusukela ngo-2010, uJingye ubelokhu ehlinzeka ngemishini esezingeni eliphakeme, uqeqesho nezeluleko kwinsizakalo yokudla nezimboni zokukhiqiza ukudla. Ifilosofi yethu ibilokhu ingukuhlinzeka ngemishini enezinsizakalo ezengezwe ngenani.
Njengoba izakhiwo ezicacile ziyizimpande zokuphathwa ngempumelelo, wonke umsebenzi uyazi ngomthwalo wakhe wemfanelo kumakhasimende ethu.
Le ndlela yokuphumelela isizuzele idumela elivelele embonini yokudla neziphuzo eminyakeni eyi-11 edlule. Igama elithi Jingye limele ubuchwepheshe bomshini ohlukile kanye nensizakalo enhle kakhulu.
UJingye uzibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende ngemishini esezingeni eliphakeme, siyazi ukuthi ngaphandle kokusekelwa okuhle kwezobuchwepheshe, noma inkinga encane ingadala ukuthi ulayini wokukhiqiza othomathikhi uyeke ukusebenza. Ngakho-ke, singaphendula ngokushesha futhi sixazulule izinkinga lapho sinikeza amakhasimende izinsizakalo zangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa nangemva kokuthengisa. Kungakho futhi uJingye engahlala ngokuqinile isabelo esikhulu semakethe eChina futhi aqhubeke nokukhula.
Ukuze ube ngumkhiqizo oholayo embonini yomshini wokudla nokuphuza isiphuzo womhlaba wonke umgomo wabantu baseJingye, sinabanjiniyela abanolwazi nabanekhono, onjiniyela bokuqamba kanye nonjiniyela bokuthuthukisa isoftware kagesi, kuyinjongo yethu nomthwalo wethu wokunikeza amakhasimende ethu okungcono kakhulu imikhiqizo, izinsizakalo nemvelo yokusebenza. Siyakuthanda esikwenzayo, futhi siyazi ukuthi inani lethu lilele ekusizeni amakhasimende ethu ukudala inani. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukahlukene, siyaqhubeka nokuqamba, ukuthuthukisa nokwakha izixazululo eziguquguqukayo zamakhasimende.